Manhajka guga ee dhirta tufaaxa si faahfaahsan
In geeddi-socodka daryeelidda geedo midho leh, manjooyin taajka ah ayaa door weyn ka ciyaaraya. Ka saaridda lafaha jiran ee daciifka ah iyo abaabulidda helitaanka iftiinka qoraxda qaybta gudaha ee beerta ma aha oo kaliya abuuri karta jawi xiiso leh, laakiin sidoo kale waxay gacan ka geysataa wax-soo-saarka kordhaya. Taasi waa sababta aad u ogaan karto dhammaan waxyaabihii la isku qurxiyo ee geedka geed gaar ah, laakiin kiiskan ayaan ka hadli doonaa geedkii tufaaxa.
Sida loo aasayo geedka tufaaxa guga
Kobcinta geedka tufaaxa ayaa ah habka ugu fiican ee warshadaha taranta, kaas oo kuu ogolaanaya inaad hesho noocyo kala duwan oo miro geed ah, oo siinaya nolol labaad oo ah warshad duq ah ama ilaalinta noocyo tufaax naadir ah. In this article, waxaan ku tilmaami doonaa sida loo aasayo geed geed tufaax tallaabo tallaabo guga iyo waxa hababka loo isticmaalo loo isticmaalo.
Waa adag tahay in la qiyaaso ugu yaraan hal beer oo geedo tufaax ah aysan korin karin. Haddii aad rabto inaad beerta beerta oo aad raadiso macluumaad ku saabsan geedo midho leh oo aan qabyo ahayn, markaa waxaan kugula talinaynaa inaad tixgelisid ikhtiyaarka ah inaad ku beeri kartid geedka tufaaxa ah, "Mahadnaq Dhibbanayaasha." Kala duwan Tani waa fond of beerta hiwaayadda hiwaayadda. Waa maxay sababta
Hababka ugu fiican ee looga ilaalin karo tufaaxyada ka soo jeeda beelaha
Xilliga jiilaalka, ciraaqyada ku nool kaynta ayaa raadiya ilaha cuntada ee geedka geedka ku leh geedo waaweyn. Kuwa ugu doorbida xayawaankani waa geedo tufaax ah - geedo yar yar iyo geedo waaweynba. Maqaalkani waxaad ku baran doontaa sida loo ilaaliyo tufaaxyada ka soo jeeda jiilaalka. Ma taqaanaa? Dhirta midhaha ugu jecel badan iyo geedo yaryar ayaa ah tufaaxa, plomme, abrikot, currants, hawada.
Qalabka dayrta ee geedaha tufaaxa
Geedka tufaaxa, sida geedka midhaha oo dhan, waxaa lagu jecel yahay cayayaanka beerta iyo, si waafaqsan, waxay u nugul yihiin cuduro kala duwan. Waxaanu soo gabagabeyneynaa in daryeelka loo baahan yahay si loo helo dalag wanaagsan. Waa inay noqotaa mid wakhtigeeda oo sax ah, oo aan ahayn hal mar sannadkii. Wax ku ool ah waa daaweynta tufaaxa dayrta goor dambe cuduro kala duwan iyo cayayaanka.
Sidee loo sameeyaa midhaha tufaaxa?
Beeraley kasta oo doonaya inuu ku raaxaysto ma aha oo kaliya muuqaal caafimaad leh oo ka mid ah "qaybaha", laakiin sidoo kale miraha udgoon. Laakiin halkaas ma joogin. Taasi waa sannadkaas, geedkii tufaaxa ee ugu caansan wuu diidi karaa inuu ku raaligeliyo tufaaxa delicious. Waa maxay sababta geedo tufaaxu midho u dhalaan iyo waxa la sameeyo xaalad noocaas ah? Si loo baabi'iyo dhibaatada dhalid la'aanta geedaha midhaha, ugu horreyntii, waxaad u baahan tahay inaad si sax ah u ogaato sababta keentay.
Astaamaha iyo sharaxaada kala duwan ee tufaaxa "Madaxa Casaanka"
Ka mid ah tirada badan ee dalagyada miraha, geedaha tufaaxa ayaa ah kuwa ugu caansan, kuwaas oo ku nool 70% dhammaan beeraha iyo beeraha guriga. Beerta ayaa si gaar ah u qadarinaysa xilliga dayrta, noocyada hore ee Bisaylkiisa, oo ay ku jiraan noocyo kala duwan oo tufaax ah "Chief Chief" ama "Snow White Apple".
Apple "Malinovka": sifooyinka, beerista agrotechnology
Maanta, suuqa ayaa ka heli kartaa tiro badan oo kala duwan oo kala duwan oo tufaax ah, mid kastaa leeyahay sifooyinka gaarka ah ma aha oo kaliya beerashada, laakiin sidoo kale dhadhanka midhaha. Tixgeli tafaariiqda "Robin", iyo waxa u muuqda inuu leeyahay. Doorashada Apple "Robin" (magac kale - "Suislepskoe") ayaa la helay iyada oo laga gudbay laba nooc: geedo tufaax ah, "Nedzvetskogo" iyo "Siberian".
Dhirta midhaha leh ee midabka leh: qaababka, xeerarka beerashada iyo daryeelka
Bannaanka beeraha ee dalal badan oo leh dhiirigelin ayaa kufilmaamaya in ay ku dhaqmaan qaab cusub oo casriyeyn ah oo ku dhirta horteed - beerista geedaha xiirta. Goobo qurxoon, dhirbaaxo leh safaf dhir udgoon, oo ka badan geedo geed-geedo ah. Kolonovidnye geedo tufaax ah, isteroberi iyo geedo kale oo miro, gaaban koritaanka, taajkii dhirta kor u kacsan, waxaa jira ku dhowaad laamood dhinac ah.
Geedka tufaaxa ee "Bratchud": dabeecadaha iyo siraha beerashada guuleysata
Noocyo tufaax ah ayaa mar walba soo jiidatay dareenka beeralayda, sababtoo ah geedo yaryar oo aad u yar waxaad ka geli kartaa hadhuudh wanaagsan. Mid ka mid ah wakiilada ugu fiican ee noocan ah waa noocyada kala duwan ee "Bratchud", oo lagu garto miraha dhadhan fiican leh iyo casiir leh, kuwaas oo aadan u baahneyn inaad ku qaadato tamar badan.
Apple "Rudolph": astaamaha, sirta ee beerashada guuleysiga
Haddii aad rabto in aad quruxda ku darto adoo faa'iido leh oo qurxinaysa sawirka geedo midho leh, ka dibna geedka dhirta Rudolf waa doorasho fiican. Qeexida iyo sifooyinka "Rudolph" waa gogol xoog leh oo sii kordhaya xilliga dayrta ee geedka tufaaxa ee qalajinta. Tilmaamaha dabeecadda - sarrifka sare, taajka pyramidal, oo leh caarad guduudan, calsan, caleemo qoyan dhinaca dhinaca dambe.
Apple "Aport": sifooyinka iyo sirta ah ee beerashada guuleysata
Waxaa laga yaabaa in dhirta ugu caansan oo aan caadi ahayn ee geedaha miraha ee adduunka ay yihiin geed geedka tufaaxa ah "Aport", oo ku saabsan kaas oo aan ku kobcin doono oo aan daryeeli doono waxyaabahan. Taariikhda asalka ah Taariikhda noocyada kala duwan ee "Aport" ayaa dib ugu soo noqnoqda taariikhda asaasiga ah, maantana ma jiro 100% xogta la xaqiijiyay oo ku saabsan asal ahaan dhabta ah.
Qaar ka mid ah geedaha tufaaxa "Starkrimson": sifooyinka iyo tiknoolojiga beeraha ee beerashada
Geedka tufaaxa waxaa si toos ah loogu yeeri karaa barxadda beerta. Haddii aad doorato noocyada saxda ah ee sii kordhaya ee beerta, waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxaysato miraha delicious sanadka oo dhan. Maqaalkeena waxaad ku baran doontaa geedka tufaaxa "Starkrimson Delishes", sharrax faahfaahsan ee kala duwan iyo talooyin waxtar leh oo ku saabsan daryeesha waxay kaa caawin doontaa inaad ku koraan this hybrid tufaax aan caadi ahayn.
Qaar ka mid ah geedaha tufaaxa "Young": dabeecadaha, khibradda iyo xayawaanka
Mid ka mid ah ereyada ugu caansan Ingiriisi waa: "Hal mar tufaax hal maalin - dhakhtarka waa ka baxsan yahay." Dhab ahaan, miraha kuwan aad bay u badan yihiin fitamiinada iyo mareellada, sidaa darteedna si joogta ah ayey u joogaan cuntada noocan ah, oo ay ku jiraan cuntada. Dhirta Apple waxaa laga heli karaa beerta oo dhan.
Geedka dhirta ayaa aad u caan ah. Ma qaataan meelo badan, sidaa daraadeed waxay si fiican u beeranayaan meelaha yaryar. Sidoo kale, dhirta tufaaxa yaryar waxay ku haboonyihiin si ay u daryeeli karaan una soo qaataan miro Goosashadoodu maaha mid ka xun tan geedaha dheer. In this article waxaan ka wada hadli doonaa noocyada kala duwan ee geedka tufaaxa ah "Wonderful". Taariikhda taranta Tani waxay kala duwantahay A.
Apple "Arkadik": astaamaha, sirta ah ee beerashada guuleysata
Haysashada beertaada waa farxad dhab ah, sababtoo ah guriga dhexdiisa marwalba wuxuu noqon doonaa miro cusub, hoyga guriga, miirka iyo jamacyada. Maqaalkani waxaan si faahfaahsan uga hadli doonaa nooca geedka tufaaxa ee loo yaqaan "Arkadik". Tufaaxyadani waa kuwo aad u macaan, kuwaas oo ay aad u jecel yihiin. Intaa waxaa dheer, kala duwan waxaa lagu gartaa by hardiness jiilaalka, fruiting badan iyo picky ee daryeelka.
Apple kala duwan "Jonagold": dabeecadaha, khibrad iyo istiraatiijiyad
Dhirta Apple "Jonagold" muddo ka badan hal sano ayaa iska leh tiro ka mid ah noocyada ugu caansan iyo kuwa caanka ah ee adduunka. Waxay xaq u leedahay uqalminta aqoonsiga noocan oo kale ah sababtoo ah sifooyinka wanaagsan, taas oo aan ka fiirsan doono maqaalka. Taariikhda xulashada "Jonagold" - nooc ka mid ah tufaaxa, oo 1943 lagu qabtay Geneva (USA) taasoo keentay isgoyska laba xulasho - "Golden Delicious" iyo "Jonathan".
Qaar ka mid ah geedaha tufaaxa "Solntsedar": dabeecadaha, khibrada iyo xayawaanka
Dhirta Apple "Solntsedar" ee dabeecaddeeda waxay ku doodi kartaa wakiillo badan oo ka mid ah nooca xulashada Yurub. Waxaan dhihi karnaa in si gaar ah loo soo saaray si ay si guul leh ugu koraan xaaladaha cimilada ee dalkeena. Miraha waxaa lagu kala saaraa dhadhan aan caadi ahayn, marka aad tijaabiso, ma dhajin doonin tufaaxa kala duwan ee noocyada kale.
Kala duwanaanta tufaaxa "Anis": sifooyinka, noocyada, beerashada beeraha
"Anis" waa noocyo kala duwan oo tufaaxa udgoon, goosashada taas oo ay ku rarayso xilliga dayrta. Kala duwan waxaa ka muuqda dhowr nooc oo isku mid ah. Waxaanu kuugu soo bandhigi doonaa si aad u ogaato sharaxaadaha dhirta ee geedaha tufaaxa "Anis", oo leh noocyo caan ah oo kala duwan, iyo sidoo kale la tacaalida geedaha sii kordhaya. Noocyada muuqaalka iyo kala-duwanaanta Kala duwanaanta lafaha ayaa leh mataan dheer, oo xoog leh oo leh taajka shaashadda, taas oo sanooyinka ka dambeeya qaabab kala duwan.